မင်္ဂလာဆောင်မယ့်သူတွေကို ဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့သက်မွန်မြင့်
မင်္ဂလာဆောင်မယ့်သူတွေကို ဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့သက်မွန်မြင့်
19 Sep 2018 . 5:34 PM
ဝါကျွတ်တော့မယ်ဆိုတော့ မင်္ဂလာဆောင်မယ့် သတို့သား၊ သတို့သမီးတွေ အတွက် မျက်စိကျလောက်တဲ့ ဝတ်စုံတွေ ၊ တန်ဆာပလာတွေကို အကောင်းဆုံးဆင်မြန်းပြီးတော့ ရိုက်ကူးရေးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒီလိုဆင်ယင်ပေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း မိတ်ကပ် လင်းလင်း က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ အခုလိုတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
“ကိုဇဏ်နဲ့ မသက်မွန် ကို ကိုမင်းသက်စံရဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံ လေးနဲ့ အလှပဆုံးဖန်တီးလိမ်းခြယ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ စေတနာထားပြီး ကူညီပေးခဲ့သော ကိုဇဏ်နဲ့ မသက်မွန် ဝတ်စုံလှလှလေး စီစဉ်ပေးတဲ့ကိုမင်းသက်စံ သိန်းသုံးထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိစိန်ဆံထုံးလေး နဲ့ရတနာလေးတွေ ဆင်မြန်းပေးပါသောမမဖြူဖြူအောင်(အောင်သမာဓိ) photo လှလှလေးရိုက်ပေးပါသော ဖေဖေဦးပီတာ နဲ့ မအားတဲ့ ကြားက လာရောက်ကူညီပေးပါသော Graphic. ကိုမျိူးကျော်နှင့် ပန်းလှလှလေးတွေနဲ့ဒီဇိုင်းစီစဉ်ပေးပါသော အန်တီနီလာ (Eternal)
ဥပါယ်တံမျဉ် ဇာတ်ကား နယ်လှည့်မိတ်ဆက်တုန်းက
ဇဏ်ခီ နဲ့ သက်မွန်မြင့် တို့ နှစ်ယောက်ကလည်း ဥပါယ်တံမျဉ်ဇာတ်ကားမှာ ပရိသတ်နဲ့ မစိမ်းတဲ့ စုံတွဲ သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ဒီကြော်ငြာလေးကတော့ အင်မတန်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတော့မှာ အမှန်ပါပဲ။
Photo Credit:Lin Linn Facebook ၊ Zenn Kyi Facebook
မင်ျဂလာဆောငျမယျ့သူတှကေို ဆှဲဆောငျလိုကျတဲ့ ဇဏျခီနဲ့သကျမှနျမွငျ့
ဝါကြှတျတော့မယျဆိုတော့ မင်ျဂလာဆောငျမယျ့ သတို့သား၊ သတို့သမီးတှေ အတှကျ မကျြစိကလြောကျတဲ့ ဝတျစုံတှေ ၊ တနျဆာပလာတှကေို အကောငျးဆုံးဆငျမွနျးပွီးတော့ ရိုကျကူးရေးလုပျခဲ့ကွတဲ့ ပုံရိပျတှကေိုတှမွေ့ငျရမှာပါ။ ဒီလိုဆငျယငျပေးမှုတှနေဲ့ပတျသကျလို့လညျး မိတျကပျ လငျးလငျး က သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျမှာ အခုလိုတငျထားတာတှရေ့ပါတယျ။
“ကိုဇဏျနဲ့ မသကျမှနျ ကို ကိုမငျးသကျစံရဲ့ မင်ျဂလာဝတျစုံ လေးနဲ့ အလှပဆုံးဖနျတီးလိမျးခွယျပေးခဲ့ပါတယျ ။ စတေနာထားပွီး ကူညီပေးခဲ့သော ကိုဇဏျနဲ့ မသကျမှနျ ဝတျစုံလှလှလေး စီစဉျပေးတဲ့ကိုမငျးသကျစံ သိနျးသုံးထောငျကြျောတနျဖိုးရှိစိနျဆံထုံးလေး နဲ့ရတနာလေးတှေ ဆငျမွနျးပေးပါသောမမဖွူဖွူအောငျ(အောငျသမာဓိ) photo လှလှလေးရိုကျပေးပါသော ဖဖေဦေးပီတာ နဲ့ မအားတဲ့ ကွားက လာရောကျကူညီပေးပါသော Graphic. ကိုမြိူးကြျောနှငျ့ ပနျးလှလှလေးတှနေဲ့ဒီဇိုငျးစီစဉျပေးပါသော အနျတီနီလာ (Eternal)
ဥပါယျတံမဉျြ ဇာတျကား နယျလှညျ့မိတျဆကျတုနျးက
ဇဏျခီ နဲ့ သကျမှနျမွငျ့ တို့ နှဈယောကျကလညျး ဥပါယျတံမဉျြဇာတျကားမှာ ပရိသတျနဲ့ မစိမျးတဲ့ စုံတှဲ သရုပျဆောငျနှဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ ဒီကွျောငွာလေးကတော့ အငျမတနျကို ဆှဲဆောငျမှုရှိနတေော့မှာ အမှနျပါပဲ။